ဆိုးသွမ်း: ကျွန်တော်တာဝန်ကျခဲ့သော( ၂ )
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:38 PM
ဟာဖတ်လို့ကောင်း နေကာမှ ဖြတ်ရတယ်လို့ဗျာ။
ကွတ်ခိုင်က တပ်ထဲမှာ မနေခဲ့ပေမဲ့၊ ကွတ်ခိုင်ဈေးပတ်ပြီး အစားစုံအောင် စားမိလို့၊လမ်းရှောက် မပြန်နိုင်လို့ အပါး ထမ်းပြန်ဘူးတယ် ဟိ၊ ဆက်ရေးပါအုံး၊ ကွတ်ခိုင်ကို သတိရလာတယ်။
be ta yawk ka Soethawn le? Pic hte mar le. 19 and half ka da kal ko aing mat twe ne lin-let de` dates twe paw. I'm commemorating those days.... can I get back naw?
အဲ့ အဲ့ ရထားစီးတဲ့ အခန်းရောက်လာပီ မြင်ယောင်လာပီကွ
မီးမီးတော့ကြောက်လွန်းလို့ အဲ့ ဂုတ်ထိပ်တံတားကို
မြန်မြန်ဆက်နော့် နာ့လို မလုပ်နဲ့ :P
ဆက်ရေး ပါဗျို့ ...
မြှောက်ပေးတာ ... အားမှသာ ရေးး::P
Can't wait to read your continue as ur written skills was awesome!!!
Look forward to it....,
နယ်သားရေ ငါတော့အမျိုးအရင်းကြီးတွေစီ မပြန်ချင်တော့ဘူး
၀မ်းကွဲတွေရှိတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မှာပဲနေလိုက်တော့မယ်နော် :D